Uzo esi ejikorita Ngwaọrụ na ngalaba ndi ozo na IGP Roist Redistribution
Ugbua na enwere ichota ihe kariri otu uzo ogugughari ma nwee karia otu uzo nhazi: ụlọ ahịa multivendor, ịmaliteghachi site na otu usoro nkwekọrịta wee banye na nke ọzọ, ntụgharị okwu nke otu usoro nkwekọrịta, ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ nke onye ọ bụla, usoro okike na usoro nyocha, njikọta, na ihe.
Redistribution bụ ụzọ na-agafe na-agafe data na-amalite site na otu usoro mgbakọ wee banye na-esote ga-enweta maka ngwaọrụ nke na-ebi na ebe dị iche iche nhazi. Usoro nkwekọrịta ọ bụla ga-enye otu n'ime ụdị data dị n'ime tebụl na-agagharị n'ime ya, Otú ọ dị, enwere agụụ ma ọ bụ mkpa iji nweta ngwaọrụ na mpaghara ọzọ. A na-eme redistribution na ọkara ma ọ dịkarịa ala otu ndị na-erigharị ala n'etiti ebe na-ebigharị ma ọ bụ usoro nkwekọrịta n'ime ohere ma ọ bụ usoro.
E nwere ụzọ atọ iji nweta mmezu zuru ezu n'etiti oghere:
Ụzọ nchọta site na ngbanwe nkwụsị. Ị nwere ike ịfe usoro ndabara site na mgba ọkụ nke na-emetụ ohere niile na-agagharị (nkwụsị mgbagwoju) na ndị na-elegharị anya na-ewepụ otu n'ime mpaghara (ngbanye aka). Nke ahụ ga-ekpuchi ụzọ dị egwu site na mpaghara ọ bụla na ndị na-agagharị n'ime ụlọ na-amaghị ihe ma nwee ndị na-agagharị na ntinye aka na njedebe nkwụsị, nke ga-enwe nchịkọta mgbakọ zuru ezu ebe ọ ga-ekere òkè na mpaghara ebe niile. Usoro a na-arụ ọrụ kachasị mma ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị otu nzube nke ịkpọtụrụ n'etiti ebe nhazi.
Ụzọ redirecting ụzọ, na ndabara. Ọ dịkarịa ala otu ndị na-eme njem na-agafe agafe agafe n'otu ebe, ma na-edegharị ya na mpaghara ọzọ. N'ikpeazụ, ị ga-ahọrọ usoro ime obodo iji wepụta ya na usoro mgbakwunye ndị ọzọ nke ga-eme ka ọ bụrụ ihe ndabara ga-ewere onye gander dị ka usoro iwu. A na-eji redistribution nke otu ụzọ mee ihe iji rute n'ọtụtụ dịgasị iche iche nke ụzọ, dịka ọmụmaatụ, na nnukwu ụlọ ọrụ mba. Usoro nkwekọrịta nwere ike ịbụ BGP (Border Gateway Protocol) na akara mbadamba (s) nwere ike ịbụ ihe ọ bụla IGP (Interface Gateway Protocol, dịka ọmụmaatụ, OSPF, EIGRP, RIP ma ọ bụ IS-IS, ma ọ bụ ọbụna ọnọdụ dị iche iche nke otu IGP. arụ ọrụ dị mma na ihe na azụ ahịa, ebe ọ bụ na "ọhụrụ" ụfọdụ akụkụ nke nzukọ ahụ adịghị mkpa ịmepụta usoro nkwekọrịta na-enweghị ike ịchọta ndị ọzọ, ma ọ bụ mkpa ịgbanwe maka oge ahụ.
Ụzọ abụọ ma ọ bụ òkè nkesa na-enyefe ole na ole ma ọ bụ ihe ka ọtụtụ n'ime data nhazi nke otu usoro nkwekọrịta ọzọ. Nke a bụ nhọrọ dị mgbagwoju anya, karịsịa ma ọ bụrụ na e nwere ihe karịrị otu nzube nke kọntaktị n'etiti ebe nhazi. E kwesiri iji ya mee ihe mgbe enwere ihe mgbaru ọsọ nke kwesiri ime ka o malite site n'otu ohere wee banye na nke ozo. Dika o nwere ike, a ghaghi ijikorita uzo di iche iche iji gosiputa otu ndi mmadu ga-esi mezuo ihe mgbaru ọsọ ndi a ma obu otu esi eme ka oru a di iche iche. Nchegbu na-eche nche mgbe niile na-ebute ụzọ abụọ, na-ezipụ loops, nhazi okporo ụzọ na nhazi ala.
Nhazi okporo ụzọ bụ ebe ebe izipu ozi abụghị otu ihe dị ka ụzọ nbata. Ihe nwere ike ịpụta ma ọ bụrụ na e nwere atụmatụ nche maka etu esi eziga ọrụ ma ọ bụ ma ọ bụrụ na e nwere ndokwa nke firewalls setịpụrụ. Enweghi ike ime ka ndi mmadu ugbua nwere nsogbu site na nhazi uzo. Ihe nkwụnye ego, nke ọrụ kwesịrị ekwesị na ngwaọrụ dị iche iche ma ọ bụrụ na ị na-edekarị adreesị, na-atụ anya ka izipu na ịlaghachi ụzọ iji bụrụ ihe a ga-ahụ anya.
Ndagharị nhazi bụ ebe ụzọ kachasị amasị ya na tebụl na-ezipụ abụghị ụzọ ọhụụ kachasị. Nke a na-eme ma ọ bụrụ na mgbanaka nkwụsị "na-anụ" banyere ụzọ si malite usoro iwu mmalite na ọzọ site na usoro mgbakọ ọzọ dị ka ụzọ mpụga. N'elu ohere na usoro nkewa iwu maka usoro mpụga nke dịpụrụ adịpụ bụ ihe a pụrụ ịdabere na ya karịa usoro mmalite, ngbanwe ahụ ga-adabere na mpụga nke ọzọ na mpaghara mpaghara. Nchịkọta ahụ bụ ijikwa ike nkewa nke ụzọ ndị a na-ezo aka na ya. Nke a abụghị usoro kachasị n'ihu na dịgasị iche site n'oge ruo n'ọzọ, ọbụna n'ime onyinye onyinye ngwaahịa nke otu onye ahịa.
Na-agagharị loops, ma ọ bụ ndenye ntinye, nwere ike ime mgbe a na-edegharị data na-agagharị n'ime otu usoro iwu na otu nzube nke kọntaktị na mgbe emesịghagharị ọzọ n'ime usoro mmalite na nzube ọzọ nke kọntaktị. Site na mgbaru ọsọ nkpeazu iji dozie esemokwu nhazi, ịkwesịrị ịmepụta ụzọ ntinye. Ọwa ahụ ga-agọnahụ ụzọ ndị na-amalite na usoro ihe mgbaru ọsọ ahụ site na ịkwaliteghachi otu n'ime usoro ahụ. Ịkwesịrị ịmepụta ọwa ahụ n'ezie. Dị ka ọmụmaatụ, na ohere ị nwere na OSPF na mpaghara EIGRP metụtara ma ọ dịkarịa ala abụọ na-elekwasị anya, ị ga-ewu otu ọwa maka ụzọ osPF niile ma nyefee ha na ntinye aha site na EIGRP n'ime OSPF. A ga-arụ ọrụ ọwa ọzọ maka ụzọ niile EIGRP, na-atụgharị ha na ntinye aha site na OSPF n'ime EIGRP. Nkewa a ghaghi ime na uzo ozo di iche n'etiti ogbugba ndu abuo iji di ike. Ị nwere ike ịhazi na prefixes ma ọ bụ ị nwere ike iji akara, nke bụ ọchịchọ m. Enwere ike ịmepụta aha ndị ahụ dịka akụkụ nke ụzọ maka redistributing the path to the protocol protocol, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịchọ maka aha iji kpọpụta na. Ịkwesịrị ịmepụta atụmatụ nke na-achọpụta na nyocha ma na-agọnahụ ha na na ohere na ha anọghị ebe ahụ, wee dee ụzọ ndị ị ga-esi ghọta usoro iwu ahụ. Emere nke a maka ịbịaru, ya mere a ga-eme fon abụọ. Usoro mgbakwunye niile, tinyere RIPv2, nwere ike ime ka akụrụngwa dị elu.
Anyị ga-ewere gander na IGP na redistribution na Cisco Ngwa. Mgbe redistributing site na otu protocol n'ime ọzọ, e nwere ụfọdụ ihe iji cheta:
Usoro ntinye akwụkwọ na-esi na tebụl na-agagharị agagharị, ọ bụghị usoro nchekwa data. Na ohere na ị ga-ebipụta RIP na OSPF, mgbe ahụ, usoro ahụ na-achọ maka ụzọ ndị a na-akpọ RIP na teepu nhazi. Enwere otu ikpe pụrụ iche: ụzọ ndị a jikọtara na usoro ahụ na-aga n'ihu.
Na ndị Cisco routers maka IPv4, ụzọ ndị a jikọtara ga-esi na redistribute kwa. Nke a dị irè ogologo oge ị na-edeghị aha mgbe ị jikọtara na usoro ahụ a na-ahụ anya, nke ga-eme ka ihe ahụ kwụsị.
Na ndị Cisco routers maka IPv6, usoro redistribution adịghị edepụta ụzọ ndị ahụ jikọtara na usoro ahụ na-aga n'ihu, ọ gwụla ma ị gụnyere ntinye nke ejikọtara ya na akara ntinye.
Ụfọdụ Cisco OS chọrọ ndokwa ejikọtara na iwu redistribution maka ụzọ a ga-esi malite site na otu protocol wee banye na-esote. Mgbe redistributing n'ime a protocol, ịkwesịrị ịnye metrics maka ụzọ na ha na-na-ezi nzukọ dị ka ihe dị ka protocol. Metric maka otu protocol anaghị achọta n'ezie maka onye ọzọ. Enwere mpempe mkpụrụ nke a ghaghị itinye na ụzọ ndị ọzọ na-abanye n'ime usoro protocol. Tebụl dị na Nkọwapụta 1 na-egosi usoro nkwekọrịta ọ bụla na ụfọdụ ihe dị iche.
Source n'ime RIP n'ime EIGRP n'ime OSPF n'ime Ọ KWESỊRỊ n'ime BGP (MED)
Njikọ 1 Metric interface 20 (E2) 0 0
static 1 Metric interface 20 (E2) 0 0
dọwara enweghi ngwụcha 20 (E2) 0 IGP metric
EIGRP enweghi ngwụcha Usoro usoro ọzọ 20 (E2) 0 IGP metric
OSPF enweghi ngwụcha enweghi ngwụcha 0 IGP metric
IS-BỤ enweghi ngwụcha enweghi ngwụcha 20 (E2) IGP metric
BGP enweghi ngwụcha enweghi ngwụcha 1 (E2) 0
Nyocha 1: Ụdị Usoro Usoro
N'ime ohere na mkpụrụ osisi ahụ adịghị agwụ agwụ, ọ gaghị ekwe omume. Ịkwesịrị ịnye ụda mkpụrụ ahụ ka ị na-edegharị usoro ihe mgbochi ahụ na ntinye ma ọ bụ site na iwu mgbochi ndabara n'okpuru usoro nhazi usoro. Mkpụrụ osisi dị na ndokwa maka usoro ahụ a na-ahụ maka ya: jumps for RIP, ụgwọ maka OSPF na IS-IS, na metricsite nke EIGRP (ikike nnyefe data, oge, àgwà na-enweghị atụ, ibu na MTU).
Otu echiche ikpeazụ - ọ bụrụ na isi iyi bụ BGP, mgbe ahụ, ọ ga-abụrịrị na e degharịrị ụzọ BGP ndị dịpụrụ adịpụ n'ime IGP. Nke a bụ usoro na-arụ ọrụ na-enweghị isi. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịdegharịa ụzọ ụzọ BGP nke dị n'ime ya, mezie ndokwa n'okpuru usoro BGP (ọ bụghị usoro protocol) bgp redistribute-internal command.
Tinyere akara ndị a, ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ karịa otu usoro nkwekọrịta na ịchọrọ iji zuru ezu ma ọ bụ ezughị ezu, ọ ga-adị mkpa ka ịdegharịa n'etiti ọgbụgba ahụ. E nwere ihe abụọ ị ga-atụle ma kwadebe maka ịmalite ịhazi. Redistribution nwere ike ịbụ isi (otu usoro nke protocol, otu nzube nke kọntaktị) na nwere ike ịbụ nnọọ enweghị atụ.